Home Wararka (Deg Deg) Senator. Muuse Suudi Yalaxow oo markale difaacday kursigii Aqalka Sare.
(Deg Deg) Senator. Muuse Suudi Yalaxow oo markale difaacday kursigii Aqalka Sare.
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa ku guuleystay tartanka senatoornimada Aqalka sare ee kursiga uu difaacanayay.
Codadkii la tiriyey waxaa uu ku guuleystay Muuse Suudi oo helay 55 cod.
Axmed Daaci ayaa helay 43 cod.